चौधरी ग्रुपको पार्टीमा झगडाः सोल्टी होटलको विवाह भोजमा गणेश थापाको गुण्डागर्दी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २८ असार २०७५, बिहीबार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरोध गरेर अघिल्लो संसदमा चर्चामा आएका पूर्वसांसद रामहरि खतिवडामाथि विवाहभोजमा सहभागी हुने क्रममा गणेश थापाले दुब्र्यवहार गरेका छन् ।
किन लाग्छ प्यास, एक दिनमा कति पानी पिउने ? पानी पिउदाकाे फाइदा र वेफाइदा के के ?
‘हामीले धेरै पानी पिउनुपर्छ । प्रत्येक दिन आठ गिलास या दुई लिटर पानी त पिउनै पर्छ ।’
काठमाडौँ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा…
चीन । विश्वकै ठूलो मानिने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कार्ल माक्र्सको २०० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमो चिनियाँ राष्ट्रपति…
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आज मतदान हुँदै छ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ…
लसएञ्जलस । हलिउडको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ शुक्रबार प्रदर्शन हुँदै छ । यो फिल्मको संसारभर एक हप्ताअगाडिदेखि नै…
साँठगाँठ र सेटिंगमा अर्बको कागज खरिद गर्दै जनक शिक्षा
काठमाडौं। जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अाज असार ४ गते साँठगाँठ र सेटिंगका आधारमा अर्ब रुपैंयाँको …